Published April 15, 2021 at 10:21 PM CDT
Axne ayaa sheegtay in dalku leeyahay nidaam soogalooti oo jaban oo ay Iowans doonayaan inay arkaan xal waara oo laga gaaro On the IPR’s River to River, haweeneyda ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegtay in jawaabta Gov. Kim Reynolds ee ku wajahan guriyeynta carruurta soo galootiga ah ee aan lala socon ay tahay arrin murugo leh. Waxay soo qaadatay faallooyinka Reynolds: waa xigasho "ma ahan dhibaatadeena."
Reynolds ayaa sidoo kale sheegtay in gobolka uusan awood u laheyn inuu taageero caruur badan. Marka la gaaro dhammaadka Maarso, in ka badan 18,000 carruur muhaajiriin ah oo aan lala socon ayaa ku sugan xarumaha xadka Mareykanka iyo Mexico.
Gudoomiyaha Reynolds ayaa maanta shaaca ka qaaday inay u qoondeyn doonto 11.5 milyan oo doolar oo ka mid ah miisaaniyadaha gargaarka ee COVID-gargaarka ee loogu tala galay adeegyada caafimaadka dhimirka ee iskuulada Iowa iyo in lagu taageero barnaamijyada tababarka shaqo ee kuleejka bulshada. Reynolds ayaa sheegtay in ku balaarinta adeegyada taakulaynta ee iskuulada PreK-12 ay gacan ka geysan doonto wax ka qabashada saameynta cudurka faafa ee coronavirus ku leeyahay caafimaadka maskaxda ardayda.
Gobolka Woodbury wuxuu ka mid ahaa 21ka degmo ee Iowa ee diiday talaabooyinka cusub ee COVID-19 ee laga siiyay gobolka usbuucan usbuucii la soo dhaafay sababtoo ah ma aysan qabin dalab ay ku isticmaalaan, sida ay sheegtay Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa. Gobollada kale ee Waqooyi-galbeed Iowa ee diidey qoondada waxay kala ahaayeen Crawford, Clay, Lyon, Osceola, iyo Sac.
Saraakiisha gobolka ayaa sheegaya in taasi ay cadeyn u noqon karto dalabka talaalka oo gaabis ah. Kuxigeenka Agaasimaha Caafimaadka Degmada Tyler Brock ayaa sheegay Talaadada in rugaha caafimaadka ee soosocda ee loo qorsheeyay in ay adeegsadaan talaalka Johnson & Johnson dib loo dhigo ama loo badalo sababo laxiriira dhibaatooyinka ka imanaya talaalkaas.
Xarunta Crittenton ee ku taal magaalada Sioux City waxay xireysaa hoyga gurmadka degdegga ah. Agaasimuhu wuxuu leeyahay arrimaha la xiriira COVID-19 ayaa…